आमा « Postpati – News For All
आमा’ भन्ने शब्दनै कति प्यारो छ । आमा बिना घर पनि घर जस्तो लाग्दैन । कुनैदिन आमा कतै जानुभयो भने पनि घर सुनसान लाग्ने गर्दछ । आमा हुदा घर पनि झलमल्ल हुने गर्दछ । आमाको काखमा निदाउनुको स्व-र्गीय आनन्द खोजेर पनि कतै भेटिन्न ।आमा तिमीले जिन्दगीको लडाइँमा रफ्तार एक्लै लडेर आफ्ना कयौं सपनाहरू सहिद बनाएर भगवानको रुप नलिएको भए कास आज म तिम्री छोरी हुन लायक हुने थिइन् । आमा म तिम्रो संघर्षलाई कसरी शब्दमा बयान गर्न सक्छु र ? जीवन र जगतलाई नजिकबाट बुझेकी तिमी साच्चिकै एक महान आमा हौ ।
मैनबत्तिको रुपमा आफुलाई पगाल्दै हामीलाई उज्यालो दिएर आफू सकिदै जाँदा पनि हरेकपल सन्तानकै खुशिको लागि प्राथना गर्ने मेरी आमा तिमी भन्दा फराकिलो मन भएको अरु को नै हुनसक्छ र ? आफ्नो सन्तानको लागि हरेक क्षणमा आफुलाई जीउँदै जलाउदै भोक प्यास निद्रा केही नभनि चर्को घाम मुसलधारे पानीको वेग पनि नभनि सन्तानको पेट भराउनुपर्ने पिर त्यसै माथी पसिनाको धारा, अर्काको मेलापात, आमा मलाई बल्ल आज महसुस हुँदैछ कि तिमीलाई त्यति बेला कति गाह्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा ।
आमा तिमीले आफुलाई दिएको खाजा पटुकाको छेउमा बाँधेर हामी तीन बहिनिको लागि लिएर आउथ्यौ । आमा म त्यो पल कति खुशी हुन्थे आज पनि सहजै महसुस गर्न सक्छु । आमा कति बेला आउलिन र आमाले ल्याइदिएको खानेकुरा खान पाइन्छ भनेर तिम्रो बाटो ढुकेर बस्ने हामि, मलाई के थाहा ? त्यो खानेकुरा तिमीले आफ्नो पेट भोकै राखेर मेरो लागि ल्याएकी हौ भन्ने, म त तिमी कतै गएर पिढिमा आउँन नपाउदै तिम्रो पटुकिको छेउ र चोलिको खल्ती छाम्न पुग्थे ।
आमा जीवनको सुरुवातदेखि नै तिमीले गरेको दुःख र कष्ट हरेकपल हरेक क्षण मेरो मानसपटलमा घुमिरहन्छ तर अहिलेसम्म तिम्रो लागि केही गर्न सकेको छैन् ।
जीवनलाई राम्रोसँग बुझेकी तर जीवनमा खुशी के हो भन्ने कुरा अझैसम्म चाल नपाएकी मेरी आमा, म तिमीलाई कुन शब्दले बयान गरुँ ? शब्दकोषमा भएका हरेक शब्दहरु तिम्रो लागि कमि हुन्छन् । सन्तानले भरिएकी भाग्यमानि मेरी आमा वास्तविकतामा तिमी कति अभागी थियौँ । एक्लै–एक्लै छोरी चार जान हुर्काउन, बढाउन र पढाउन कति मुस्किल प¥यो, मेरी प्यारी आमा त्यो दुःख तिमीलाई बाहेक कसलाई पो थाहा छ र ? मेरी आमा म बुझ्न सक्छु तिम्रो जवानी पीडामै बित्यो । दिन बित्यो रात बित्यो महिना बित्यो कयौं साल पनि बित्यो तर यो बुढेसकालमा पनि तिम्रो उहीँ हाल छ ।
आमा तिम्रा पनि कयौं सपना र रहरहरु हुँदो हो, आमा यो सब तिम्रो सहनशीलताको प्रतिफल हो । त्यसैले पनि आमा तिमी साँच्चिकै एक महान आमाको प्रतिमुर्ति हौ ।
आमा छोरीहरु साना हुँदासम्म लाग्थ्यो होला यिनिहरु ठुला भएपछि मेरो पनि सुःखको दिन आउनेछ । तर आमा जब छोरीहरु ठुला भए आ–आफ्नै बाटो लागे तिम्रो दुःख, तिम्रो संघर्ष जहाँको त्यहीँ रह्यो ।छोरि जन्माएकी मेरी आमाले सधै भन्थिन् त्यहीँ छोरिको मुख हेरेर बसेको हुँ । तर छोरिले आमाको मुख, आमाले छोरिको मुख अनि हामीले दिदिको मुख कहिले हेर्न नपाउने भएको पनि आज बर्षौ भएछ । आमाले बुढेसकालको सहारा होला भनेर हुर्काएको छोरि ।।
तर पनि मेरी आमा तिमी साँच्चिकै सहनशील एक सच्चा महान आमा हौ भगवानको अर्को रुप हौ । जीवनमा जति बज्रपात आए पनि हासेर सहिदिने तिमी अनि जति जीवन दुखे पनि नदुखे झै गरि हिड्ने मेरी आमा म तिम्रो अनुहारमा राम्रोसँग देख्न सक्छस, कि पीडा कति छ ? तर लाचार भएर हेर्नू सिवाय अरु केही गर्न सकिरहेको छैन । माफ गर आमा तिम्रो जीवनको यो उमेरसम्म आइपुग्दा पनि तिमीलाई अलिकति सुखको अनुभुति गराउन सकिन । आमा मलाई बाल्यकाल देखिको सबै कुरा याद छ व्यक्त गर्न सक्दिन ।
आमा तिमीले मेरो लागि बगाएको रगत, पसिना, आँसु र खुवाएको दश धारा दुधको भारा म जस्तो एक लाचार छोरीले कसरी तिर्न सक्छु होला र ? आफ्नो जीवनलाई नुनिलो आँसुले धोएर सन्तानको खुशी खोज्ने मेरी आमा ! म तिम्रो खुशी कसरी फिर्ता लिन सक्छु होला र ? तर आमा म जहाँ भए पनि जहाँ गए पनि तिमी सधैं मेरो वरिपरि भएको महसुस हुन्छ ।
सबै कुरा फेरिए तर तिम्रो अवस्था कहिले फेरिन सकेन । जीवनमरणको दोसाँधबाट उम्केर आफ्ना सारा इच्छा, चाहना र भावनालाई कुल्चिएर सन्तानको सदासर्बदा भलो चाहने मेरी आमा सन्तानकी सृष्टिकर्ता, ममताकी खानी, लाखौं दु:ख-कष्ट बिर्सेर सन्तानकै खुसीमा दत्तचित्त रहने सम्पूर्ण आमाहरूलाई लाख-लाख प्रणाम। सबै सन्तानहरूलाई आमाप्रतिको कर्तव्य पालना गरी आमालाई सधैं खुसी राख्न आग्रह गर्दै सबै आमाहरूलाई वहाँहरूको सुस्वास्थ्य, सदैव सन्तानका साथ अपार खुसी र सुखमय दीर्घजीवनका लागि हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।
२७ बैशाख २०७८, सोमबार को दिन प्रकाशित